Sound Effects Ringtones ~ The ICT.com.mm Blog
Ringtonesကို သီချင်းတွေ ထည့်ထားရတာ ရိုးနေပြီလား၊ အသံ ကို ကြားတာနဲ့ လူတွေ လှည့်ကြည့်မိအောင် ဖြစ်စေချင်သလား၊ ဒီ Appလေးကို Download အမြန်လုပ်ပေတော့၊ ပတ်၀န်းကျင်မှာ ကြားနေကျ ဆူညံသံတွေကို စုစည်းထားတဲ့ Appလေး တစ်ခုပါ။ လက်ခုပ်တီးသံတွေ၊ ကားဘရိတ် အုပ်တဲ့အသံတွေ၊ နှာချေသံတွေ စသည်ဖြင့် အများကြီး ပါ၀င်ပါတယ်။ လူအများကြားထဲမှာဆိုရင်တော့ ကို့ Ringtoneလေးက သတိပြုမိစရာ Ringtoneလေး ဖြစ်နေမှာပါ၊ အသုံးပြုပုံက အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်၊ Install လုပ်ထားရုံပါပဲ။ ဧပြီလက ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူ တစ်သန်းကျော်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ် Google Playမှာ အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
App, effects, Ringtones app, sound, sound effects, Sound Effects Ringtones
Newer Eye Scanner Unlock
Older Mobile Doc Scanner
၀င်းဒိုးမှာ ဘယ် Appsတွေက အင်တာနက် ချိတ်ဆက်နေသလဲဆိုတာ လေ့လာနည်း
သင့်ရဲ့ အင်တာနက် အမြန်နှုန်း ကျဆင်းလာတာဟာ အကြောင်းအချက်များစွာ အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ISP, Routerနဲ့ အခြား Networkကိရိယာတွေမှာ ပြဿနာ မရှိဘူးဆ...
ခေတ်ဟောင်းကို ပြန်လည် အသက်သွင်းထားတဲ့ Vine App
အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာ ရုပ်ရှင်ခေတ်ဦးကလို Stop-motionကို ပြန်လည် အသက်သွင်းပေးတဲ့ Vine App ထွက်ရှိလာပြီး တစ်ပတ်အတွင်းမှာ အင်တာနက် အသုံးပြုသ...
ခရီးသွားတွေ အတွက် Yangon Map (Beta)
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေလည်း များလာသည်နှင့်အမျှ နိုင်ငံတွင်း ခရီးသွားလာ လည်ပတ်သူတွေ၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စတွေနဲ့...
အလွယ်ကူဆုံး သုံးနိုင်မယ့် English Myanmar Dictionary
Developer, NDTက ရေးဆွဲ ဖြန့်ချိတာ ဖြစ်ပြီး မတ်လ ၂၉ရက်နေ့က ဖြန့်ချိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့ ရယူနိုင်မယ့် App ဖြစ်ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ...
Android အတွက် မြန်မာ ပြက္ခဒိန် MM Year 100
သူကတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ လူမျိုးတွေ အကြည့်များတဲ့ နှစ်တစ်ရာ ပြက္ခဒိန်ဖြစ်ပြီး အရင်က စာရွက်လှန်ပြီး ကြည့်နေရတဲ့ ဘ၀ကနေ ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်...
Android စနစ်သုံး Alarm Clock App အသစ်က အချိန်မှန် နှိုးစက်ပေးမည်
မကြာသေးခင်ကမှ အသစ်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Android စနစ်သုံး Warmlyအမည်ရှိ Alarm Clock Appက သင့်ကို အချိန်မှန်မှန်နဲ့ သာယာပျော့ပျောင်းသော အသံ တွေနဲ...
MobileGo ကို သုံးမယ်ဆိုရင်
Android ဖုန်းတွေကို ကွန်ပျူတာပေါ်ကနေ Apkဖိုင် Installလုပ်မယ်၊ Data Backup လုပ်မယ် စသဖြင့် ကွန်ပျူတာပေါ်ကနေပဲ အဲ့ဒီကိစ္စတွေ လုပ်တော့မယ် ...
မိမိဖုန်းကို ခေါ်ဆိုနေသည့် သူဟာ မည်သည့်နေရာမှာ ရောက်ရှိ နေသည်ကို အ၀င် Callကို ကြည့်ရုံဖြင့် သိရှိအောင် ဖော်ပြပေးမယ့် App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်...
Eye Scanner Unlock
နာမည်ကြီး သိပ္ပံအက်ရှင် ဇာတ်ကားထဲကလို Unlock လုပ်ဖို့ အတွက် မျက်လုံးကို Scan ဖတ်ရတဲ့ Lock တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ ကင်မရာကို အသုံးပြုပြီး ...
Mobile Doc Scanner ဆိုတာ လုပ်ငန်းခွင်သုံး Android App တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းစာရွက်တွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေ ကင်မရာနှင့် ရိုက်ယူပြ...
ခဲခြစ်ပန်းချီ ဒီဇိုင်းမျိုး ဖန်တီးပေးမယ့် App ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြု ပုံက သင်ရဲ့ Galleryသို့ Captureမှာရှိတဲ့ ပုံတစ်ပုံကို ယူပါ။ သင် Effec...
Categories Select Category Apps Architecture Archive Audio Audio & Video Automobile Beauty Business Cables & Adapters Cameras Coffee Machine Comics Currency Counting Machine Design Desktop DVD & SET-TOP BOXES Education Featured Foods Furniture & Deco Gadgets Gaming Gift Card Graphic Cards Graphics HDD Health Health & Wellness How-to Interview Laptops Lifestyle Mac Makeup Mobile Mobile Accessories Monitors News Newsroom Opinion Phones Policy & Law Printers Projectors Promotion Review Sewing, Cleaning & Laundry Shopping Smart Home Smart Watch SSD Tablets Travel Video Conferencing Systems Web Webcams Weekly Journal